CO2 Laser akara Machine, Fiber Laser akara Machine - Feiquan
Eriri Split Portable akara Machine
Intelligent Integrated akara Machine
Eriri laser ịgbado ọkụ igwe
Handheld Fiber Laser ịgbado ọkụ Machine
Ọgụgụ isi ike na-akanye igwe
Feiquan Laser-enye elu-mma ulo oru laser ngwá ngwaahịa na laser nhazi technology ọrụ.
Uru ngwaahịa na ọrụ, na mgbe niile mma ngwaahịa arụmọrụ na àgwà
Ihe dị iche n'etiti n'ihu Laser ịgbado ọkụ Ma usu Laser
Feiquan Laser Technology Wuxi Co., Ltd. bụ a elu-tech enterprise ilekwasị anya ọgụgụ isi ma na ọgụgụ isi n'ichepụta nke laser ụlọ ọrụ ngwá. Na ozi nke "laser ngwa, mma ọrụ ndụ", anyị na-anọgide na-enye ndị ahịa na ihe karịrị anya. Uru ngwaahịa na ọrụ, na mgbe niile mma ngwaahịa arụmọrụ na àgwà, emewo n'ime otu n'ime pụtara ìhè ụlọ ọrụ na ulo oru laser ngwá n'ichepụta ...
Ọgụgụ isi ike na-akanye ...
Eriri kewaa obere marking igwe
Olee ebe ndị anyị Business nso: N'ihi ya, anya anyị na-guzosie ike prosy gị n'ụlọnga usoro ke Algeria, Egypt, Iran, South Africa, India, Malaysia na ndị ọzọ na Southeast Asian N'ókèala. Ọzọkwa na Middle East na South America. Anyị nwere onye na a ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị ahịa.
PCB akara Machine , Environmental Protection Industry, Industrial Inkjet Printer For Bottle, Pencil Engraving Machine, Laser Rust Removal 100w 200w 1000w, Akpụkpọ anụ Laser osise Machine ,
Nke 578-3 Yanxin Road, Huishan Economic Development Mpaghara, Wuxi, Jiangsu, China